Ny anton'ny hihainoana an'Andriamanitra
Isaia 48:12-22 "12 Mihainoa Ahy, ry Jakoba, Sy ry Isiraely izay nantsoiko: Tsy miova Aho; Izaho no voalohany, ary Izaho koa no farany. 13 Eny, ny tanako no nanorina ny fanambanin’ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra; Raha antsoiko ireo, dia indray miseho avokoa. 14 Mivoria hianareo rehetra, ka mihainoa: Iza moa amin’ireny no mba efa nanambara izany; ilay tian’i Jehovah no hahefa ny sitrapony amin’i Babylona ary ny sandriny ho amin’ny Kaldeana. 15 Izaho dia Izaho ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy Aho, ka hambinina ny lalany. 16 Manatona Ahy hianareo, ka mihainoa; hatramin’ny taloha no efa tsy nitenenako tamin’ny mangingina, hatry ny fony vao nisian’ireo dia teo Aho, ary ankehitriny Jehovah Tompo no naniraka Ahy sy ny Fanahiny. 17 Izao no lazain’i Jehovah, Mpanavotra anao, dia ny Iray Masin’ny Isiraely: Izaho, Jehovah Andriamanitrao, no nampianatra anao hahita soa sady mitarika anao amin’ny lalana tokony halehanao.18 Toy izay anie hianao mba nihaino ny didiko! Dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, 19 Ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny aloaky ny kibonao ho tahaka ny sombim-pasika; Ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. 20 Mivoaha hiala any Babylona; miezaha avy any amin’ny Kaldeana; torio amin’ny feo mahafaly, ary ambarao, ka aelezo hatrany amin’ny faran’ny tany, lazao hoe: Jehovah efa nanavotra an’i Jakoba mpanompony. 21 Ary tsy nangetaheta ireo tamin’ny nitondrany azy tany an-efitra; Nampiboiboika rano ho azy avy tamin’ny vatolampy Izy, Eny, nampitresaka ny vatolampy Izy, ka dia nigororoana ny rano. 22 Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah."
Andriamanitra masi-mandidy Izy (12-15). Izy no niantso an’Israely, kanefa koa dia Andriamanitra tsy miova Izy. Izy no nahary izao rehetra izao, fiandohana sy fiafarana, koa dia afaka manao izay tiany atao amin’ny zavatra rehetra. Izy no handrava an’i Babilona (Isaia 47) ary amin’ny alalan’i Kirosy, izay mpanjaka jentilisa no hanaovany izany ary dia hanaraka izay lazainy io. Andriamanitra manao fanambarana (14). Rehefa miteny Izy dia tsy miteny mangingina fa re eran’ny tany rehetra ny feony. Izay tsy te handre ihany no tsy maheno izany. Maniraka ny Mpanompony Izy hanambara ny teniny ary momba azy amin’ny alalan’ny Fanahiny. Manaiky hirahiny hanambara ny teniny ve ianao? Andriamanitra mitarika amin’ny tsara (15-21). Andriamanitra Mpamonjy Izy ary amin’ny ho amin’ny soa ny fampianarany. Izay mihaino Azy dia ho tototra fitahiana dia ny fiadanana sy ny fahamarinana izany, izay tsy inona fa vokatry ny Fanahy (Galatiana 5:22-23). Ho maro ny olona hovoataonany (19). Ho afaka amin’ny fanandevozana izy (Jaona 8:31-32:34,36) ary izay vao tena ho vavolombelon’ny Tompo (20) ary farany dia tsy hanan-java-mahory (21). Andriamanitra Masina (22). Tsy hahazo ireo rehetra voalaza tetsy ambony ireo mihitsy anefa izay tsy mihaino ny Teniny sy tsy mety mibebaka vokatr’izany (20a). Tsy hisy fiadanana mihitsy ho an’ny ratsy fanahy. Maika foana amin’ny fanaovan-javatra isika kanefa tsy maharitra mihitsy ny hihaino ny Tenin’Andriamanitra aloha. Ny fihainoana ihany no tena fanalahidin’ny fahombiazana! Tsarovyi Maria sy Marta (Lioka 10:38-42).